musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » Chipatara cheThailand chinowana zvimwe zvitsva zveDelta
Health News • nhau • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Akasiyana Nhau
New Delta sub-variants yakawanikwa neThailand hospital - Mufananidzo wakakomberedzwa naPattaya Mail
Ramathibodi Chipatara muThailand chawana ina mitsva mishoma-misiyano yeiyo Delta strain yeinovheneka coronavirus mumasampuli akaongororwa nechipatara.
Parizvino, nyanzvi dzakacherekedza pamusoro pemakumi matanhatu zvinokwanisika shanduko mumagene ekugadzirwa kweiyo Delta strain.
Pakati peizvi, makumi maviri nemaviri anozivikanwa kuve anokonzeresa nekuonekwa kwezvitsva-zvidiki.
Delta misiyano yakatenderedza 60 muzana inopararira kupfuura yekutanga SARS-CoV-2 hutachiona uye inogona kupukunyuka hutachiona kubva kuhutachiona hwepamberi ingangoita hafu yenguva.
Musoro weRamathibodi Hospital's Center for Medical Genomics, Prof.
Akataura kuti akasiyana-siyana AY.4 (B.1.617.2.4) akawanikwa mu3% yemasampuli akatumirwa kubva kuPathum Thani, neAY.6 (B.1.617.2.6) yakawanikwa mu1% yemasampuli kubva kumatunhu ese nyika. Zvichakadaro, zvidiki-zvakasiyana AY.10 (B.1.617.2.10) uye AY.12 AY.12 (B.1.617.2.15) zvakawanikwa mu1% yemasampuli akatumirwa kubva kuBangkok.
Parizvino, nyanzvi dzakacherekedza pamusoro pemakumi matanhatu zvinokwanisika shanduko mumagene ekugadzirwa kweiyo Delta strain. Pakati peizvi, makumi maviri nemaviri anozivikanwa kuve anokonzeresa nekuonekwa kwezvitsva-zvidiki. Yekutanga Del-sub-variants, iyo yakave yakasimbiswa, AY.60 uye AY.22, zvakatanga kuwanikwa muNepal.
Vatsvagiri paColumbia University Mailman Chikoro cheRuzhinji Hutano vakashandisa modhi yemakomputa kufungidzira kuti iyo Delta misiyano yakatenderedza 60 muzana zvakare inopararira kupfuura yekutanga SARS-CoV-2 hutachiona uye inogona kupukunyuka hutachiona kubva kuhutachiona hwepamberi ingangoita hafu yenguva. Inofananidzwa neDelta, Beta uye Gamma hazvitapurike asi vanokwanisa kupukunyuka hutachiona. Kuenzaniswa nehutachiona hwepakutanga, Iota inonyanya kuuraya kune vakuru vakuru.
Dr. Wan Yang, PhD, mutevedzeri purofesa wezvirwere uye munyori anotungamira wezvidzidzo izvi akati: kubaiwa kana usati wadaro.
“Zvakakosha kuti titarise zvakanyanya kupararira kwemhando dzakasiyana idzi kuitira kuti titungamire nzira dzekudzivirira, mishandirapamwe yekudzivirira, uye kuongororwa kwehutano hwejekiseni.
"Zvikurukuru, kudzikamisa kubuda kwemimwe misiyano uye magumo iyo COVID-19 denda, tinoda kuedza kwepasi rose kubaya vanhu vese pasi rose, uye kuramba tichishandisa dzimwe nzira dzehutano hwevanhu kudzamara chikamu chakakwana chevanhu chadzivirirwa nenjodzi. ”